မယ်ဆိုတာအဲဒီအစားနှင့်အတူ ဖော်ပြ. Preferences ကို
w မဟုတ်ဘဲအောက်အက်ဘနှင့်အလိုရှိပါနှစ်ဦးစလုံးအင်္ဂလိပ်စာဦးစားပေးဖော်ပြအသုံးပြုကြသည်။ ဤတွင်အစားအလိုတခုတည်းကိုသုံးပါနှင့်ဖြစ်စေပြည်နယ်မှကြိုက်တတ်တဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ် preference ကိုတောင်းခံမယ်လို့တိုတိုပြောဆိုမှုများအချို့ကိုဥပမာဖြစ်ကြသည်။
ယောဟနျသ: ဘယ်လိုရုပ်ရှင်သွားကောအသို့နည်း Tom Hanks နှင့်အတူထွက်အသစ်တစ်ခုရုပ်ရှင်ရှိပါတယ်။
မာရိသညျ: ငါမဟုတ်ဘဲညစာထွက်သွားရချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဗိုက်ဆာနေတယ်!
ယောဟနျသ: အိုကေ။ သငျသညျအရာစားသောက်ဆိုင်ပိုနှစ်သက်ပါ့မလား
မာရိသညျ: ငါဂျော်နီရဲ့မှာစားရန်ပိုနှစ်သက်ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကအကြီးအသားကင်ဝတ်ပြုကြလော့။
Debbie: ကောင်းပြီ, သင်၏ရွေးချယ်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
Debbie: ဘယ်လို Moby Dick ကော?
လိုငျးအစား - ဖွဲ့စည်းပုံ
အလိုတခုတည်းမဟုတ်ဘဲပေါင်းကြိယာ၏ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုသုံးပါ။ ဒါဟာအစားကိုတိုအတွက်သုံးစွဲဖို့ဘုံမယ်လို့ရဲ့ '' မဟုတ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖွဲ့စည်းd။ အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲအချိန်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနာဂတ်ယခုအချိန်တွင်ရည်ညွှန်းဖို့မလား။ ဤတွင်အဆောက်အဦများနေသောခေါင်းစဉ်:
ဘာသာရပ် + မဟုတ်ဘဲ ( 'မဟုတ်ဘဲ d) မယ်လို့ + ကြိယာ
လို + ဘာသာရပ် + မဟုတ်ဘဲ + ကြိယာ
ဘာသာရပ် + မဟုတ်ဘဲ ( 'မဟုတ်ဘဲ d) + ကြိယာ + မဟုတ်ဘူး
မြင်းစီးခြင်း go ထက်သူမသည်မဟုတ်ဘဲတင်းနစ်ကစားမည်ဖြစ်သည်။
အစားလည်းလူတစ်ဦးသည်အခြားလူတစ်ဦးပြုပါလိမ့်မယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ်ဆန္ဒဖော်ပြကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအဆိုပါ Unreal ခြွင်းချက်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ပုံစံကိုလည်းယဉ်ကျေးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးရန်အသုံးပြုသည်။
S + မဟုတ်ဘဲ + ပုဂ္ဂိုလ် + အတိတ်ကြိယာလို
တွမ်မဟုတ်ဘဲမာရိဟာ SUV ကားဝယ်လိမ့်မယ်။
ဘာသာရပ် + မဟုတ်ဘဲ ( 'မဟုတ်ဘဲ d) + အရာဝတ္ထု + အတိတ်တင်းမာနေလို
လို + ဘာသာရပ် + မဟုတ်ဘဲ + အရာဝတ္ထု + အတိတ်တင်းမာနေ
သငျသညျမဟုတ်ဘဲသူအစည်းအဝေးမှကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ လာ. , မလား?
လက်ရှိဦးစားပေးအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်မဟုတ်ဘဲအစားအလိုတခုတည်း၏အလိုရှိပါဒါဟာသုံးစွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကပိုနှစ်သက်အတိုင်းလိုက်နာ ကြိယာ၏ infinitive ပုံစံ :
ဘာသာရပ် + (ပြုပါရန်) ကြိုက်တတ်တဲ့ ( 'ကြိုက်တတ်တဲ့ d) + infinitive မယ်လို့
အဆိုပါ teacher'd လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းစမ်းသပ်ရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်။
(လုပ်) လို + ဘာသာရပ် + ကြိုက်တတ်တဲ့ + infinitive
သူတို့ကတစ်ပတ်က New York မှာဆက်နေရန်ပိုနှစ်သက်ပါ့မလား
အတူ ဖော်ပြ. Preferences ကိုဦးစားပေး
လူတွေ, နေရာတွေသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအကြားယေဘုယျဦးစားပေးဖော်ပြကြိုက်တတ်တဲ့အတူရိုးရှင်းသောပစ္စုပ္ပန်ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ preference ကိုဖော်ပြမှရန် preposition ကိုသုံးပါ:
ဘာသာရပ် + အရာဝတ္ထုမှ + အရာဝတ္ထု + ကြိုက်တတ်တဲ့
+ ဘာသာရပ် + အရာဝတ္ထုမှ + အရာဝတ္ထု + ကြိုက်တတ်တဲ့ Do
သူမချီကာဂိုမှ New York ကပိုနှစ်သက်ပါသလား
လှုပ်ရှားမှုများ, အသုံးပြုဖို့ဦးစားပေးဖျောပွအခါဖြစ်စေခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် Preferences gerund သို့မဟုတ်ကြိယာ၏ infinitive ပုံစံ:
ဘာသာရပ် + / + အရာဝတ္ထုလုပ်နေကြဘူးမှ + ကြိုက်တတ်တဲ့
+ ဘာသာရပ် + / + အရာဝတ္ထုလုပ်နေကြဘူးမှ + ကြိုက်တတ်တဲ့ Do
(ပြုလုပ်ဖို့, လုပ်နေတာပြုလျက်,) ကိုကြိယာ၏မှန်ကန်သောပုံစံနှင့်အတူကွာဟမှုအတွက်ဖြည့်ပါ:
ညစာ Jennifer'd မဟုတ်ဘဲ _____ (နေထိုင်) အိမ်မှာယနေ့ည။
ငါကယနေ့ _______ (ပြဇာတ်) စစ်တုရင်ကြိုက်တတ်တဲ့ချင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသင် (စွန့်ခွာ) သင်မဟုတ်ဘဲငါ _____ မလား
ငါသည်သူတို့၏စမ်းသပ်မှုကိုများအတွက် _____ ကျောင်းသားများမဟုတ်ဘဲ (လေ့လာမှု) ချင်ပါတယ်။
ပေတရုသည်တနင်္ဂနွေအပေါ်အိမ်မှာ (အနားယူ) _____ ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
Preferences ကိုပဟေဠိ II ကို
သငျသညျ _____ လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကြိုက်တတ်တဲ့ပါသလား
ငါ _____ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှမောင်းထုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့ချင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
သငျသညျမဟုတ်ဘဲကမ်းခြေကိုသွား _____ ကလပ်ကိုသွားမလား? (ကရှေးခယျြမှုအတှကျတောငျးဆိုန)
သူမဟုတ်ဘဲကမ်းခြေကိုသွား _____ တနေ့လုံးအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်! (ကတိကျတဲ့ရွေးချယ်မှုစေ)
ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေ _____ အမေရိကန်အစားအစာဂျပန်အစားအစာကြိုက်နှစ်သက်သည်။
အပန်းဖြေဖို့ / လျှော့ပေါ့
ပဟေဠိ II ကို
အင်္ဂလိပ်လိုရှုပ်ထွေး preposition Pairs
ညွှန်ပြ Close သို့မဟုတ် Proximity
Will နှင့်အတူအနာဂတ်ဖို့ကိုလမ်းညွှန်နှင့်မှ Going
အင်္ဂလိပ်တင်းမာနေ Timeline ကိုကိုးကားစရာ
"ဓာတ်လှေကား" Conjugate လုပ်နည်း (နောက်ဖို့, Up ကိုယူခဲ့ဖို့, ဖိအားပေးရန်မှ)
ပြင်သစ် Grammar နှင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရသတ်မှတ်ချက်များအညွှန်း
Derrière / Avant ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက် Devant ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်Aprèsအကြားကွာခြားချက်များ
စာရာသည် Cloyce: အလမ်စုန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံရ
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ် Ambrose Burnside
အခမဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုသာန်နှင့် Casualty Databases များကိုအွန်လိုင်း
Razones por Las Que tu ဗီဇာမသန်စွမ်းအမေရိကန်နိုင်ငံအဘယ်သူမျှမ es aprobada (inelegible)
ယင်းမစ်ဆူရီချိုင့်ညီလာခံတက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး '' 90 Band တစ်ကျော့ပြန်
အဂ္ဂိရတ်သုံးခု Prime - Tria prima
ဘယ်လို Raspberry Pi အပေါ် Setup ကိုနှင့်အသုံးပြုမှု SSH ကိုမှ
အဘယ်ကြောင့် Do ဆစ်ခ်ပန်ချာပီခေါင်းပေါင်း Wear?
အဆိုပါ Higgs Boson အကြောင်းစာအုပ်များ
ဘယ်လိုစပိန်အသုံးပြုမှုဇော-Down မေးခွန်းနှင့်အာမေဍိတ် Marks ပါသလား
ဖုတ်ကောင်, Movies 101
ဂေါက်၏စည်းကမ်းများ - နည်းဥပဒေ 5: အဆိုပါ Ball ကို
Saga Dawa သို့မဟုတ် Saka Dawa
The Impact စားသုံးသူကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်ရှိထားသည်
အဆိုပါရှစ် Impressionist ပြပွဲများ, 1874-1886